लिंक डेटोक्स: ब्याकलिks्कहरू फेला पार्नुहोस् जुन तपाईंको एसईओलाई मार्दै छ | Martech Zone
लिंक डेटोक्स: ब्याकलिks्कहरू फेला पार्नुहोस् जुन तपाईंको एसईओलाई मार्दै छ
ब्याकलिinking्किंग एक धेरै धेरै नै खतरनाक खेल हो। कुन समयमा तपाईंको क्रमबद्ध अनलाइन निर्माण गर्न सबैभन्दा सजिलो विधि थियो अब तपाईंको साइट गाडिदिन सक्छ। अब यो अत्यावश्यक भएको छ कि तपाइँ लिंकहरू अस्वीकार गर्नुहोस् यसले तपाईंको खोज रैंकिंगलाई मारिरहेको छ - प्रविष्ट गर्नुहोस् लिंक डेटोक्स, मा उत्पादन को परिवार को हिस्सा LinkResearchTools.
लिंक डेटोक्स एक एकल उपकरण हो जुन डोमेनको ब्याकलिंक्सलाई categories कोटिहरू (विषाक्त, शंकास्पद, वा स्वस्थ) मा वर्गीकृत गर्दछ र तपाईंको लिंक प्रोफाइल सफा गर्न तपाईंलाई समर्थन गर्दछ। लिंक डेटोक्सको इन्टरफेस ह्यान्डल गर्न को लागी सजिलो छ, तपाईं एकल क्लिकको साथ तपाईंको साइटमा सबै मालिसियस लिंकहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। लिंक डेटोक्स तपाईंको लिंक प्रोफाईल विभिन्न एसईओ मेट्रिक्स र ज्ञात समस्याग्रस्त संदर्भहरूमा आधारित विश्लेषण गर्दछ। त्यसपछि ती ती विषालु लिंकहरूका लागि सिफारिशहरू प्रदान गर्दछ।
तिमी सक्छौ लिंक डेटोक्सको लागि साइन अप गर्नुहोस् र det 1 को लागि प्रति महीना १ detox कार्यान्वयन।
टैग: ब्याकलिinking्कbacklinksनराम्रो ब्याकलिks्कनराम्रो लिंकहरूलिंक डिटॉक्सलिंकरेसर्च्टोल्स
यो यस्तो छ कि तपाईंलाई थाहा छ कि मैले आज रातमा यो गरिरहेको थिएँ। सबै ब्याकलिks्कहरू हटाईयो तर साइटको गृह पृष्ठमा यूआरएलहरू स्विच गरेर र तिनीहरूलाई 301०१ मात्र छैन - विशाल PITA। यसले महिना लिन सक्दछ, तर त्यसैले म गाढा खैरो टोपीको लागि पाउँछु।
गृह पृष्ठका लागि अस्वीकार गर्नुपर्नेछ
यो एक सजिलो तरीका जोडी हो। केवल LinkResearchTools मा लगइन गर्नुहोस् र बाँकी तिनीहरूले स्वचालित रूपमा गर्नेछन्। म म्यान्युअल विधिहरूको साथ पेन्गुइन कसरी जोगिने भन्ने सम्बन्धमा लेख पढें। http://www.technologyace.com/internet-marketing/seo/recover-blogwebsite-google-latest-penguin-2-0-update/
जब म लिंक अनुसंधान र लिंक डेटोक्स प्रयोग गर्छु म सेवा र नतिजाबाट धेरै निराश थिएँ। धेरै भएको छैन, र मलाई आवश्यक परे पछि मलाई धेरै मद्दत दिइएन। मैले विभिन्न फोरमहरूमा धेरै राम्रा समीक्षाहरू हेर्दा मेरो ब्याकलिks्कहरू क्रमबद्ध गर्न लिंक अडिटर्स प्रयोग गर्ने निर्णय गरें। तिनीहरूको सेवा धेरै राम्रो थियो! तपाइँसँग प्रश्न वा सल्लाहका साथ मद्दत गर्न तिनीहरूसँग टोली सधैं हुन्छ। लि Aud्क अडिटर्स उपकरणहरू प्रयोग गरेर, मैले मेरो सबै विषाक्त लिंकहरू भेट्टाउन सकें, र ती सबै पूर्ण रूपमा हटाइए। जेसन, मसँग कुरा गर्ने टोली सदस्य, फोन समर्थनमा धेरै सहयोगी थियो। उनले मेरा समस्याहरू सुन्थे र के ठीक थियो भनेर वर्णन गरे। एक पटक उसले यो गरेपछि उनले मलाई भने कि कुन उपकरण मेरो लागि सब भन्दा राम्रो काम गर्दछ।
लि Aud्क अडिटर्स उपकरणहरूको प्रयोग गरेर, मैले धेरै विस्तृत डाटा पाएँ, मैले देख्न सक्ने कुरा केहि लिंकहरूले मलाई हानी पुर्याइरहेको थियो र मलाई थाहा थियो कुन लिंक हटाउन आवश्यक छ। तिनीहरूको हटाउने उपकरण प्रयोग गर्न एकदम सजिलो थियो किनकि यो पूर्ण स्वचालित र धेरै छिटो छ। मैले विभिन्न हटाउने उपकरणहरू प्रयोग गरें जुन ईन्टरनेटमा उपलब्ध छन्, र तिनीहरूको सबैभन्दा राम्रो थियो!
मैले लिंक अडिटर्स पनि प्रयोग गर्‍यो। तिनीहरूले मेरो अडिटमा मलाई धेरै नै मद्दत गरे, मलाई आवश्यक परेको बेला समर्थन प्रदान गर्नका साथै मलाई मेरो समस्या बुझाउँदै। यो पोस्ट गर्न को लागी धन्यबाद किनकि मलाई लाग्छ कि अरु मानिसहरु उनीहरुको बारेमा जान्नु पर्छ। उनीहरूले प्रदान गरेको सेवा केवल शानदार, यति विश्वसनीय र कार्यान्वयन गर्न सजिलो छ।